store procedure - MYSTERY ZILLION
January 2016 edited January 2016 in C#
storeprocedure ကို ado.net C# သုံးပီး microsoft sql မှာ အသစ် တခု create လုပ်ခ ျင်တယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်း sp ကနည်းနည်းကြီးတယ် if တွေ else တွေလည်းတော်တော်ပါလို့
Stored Procedure ကို ဘယ်လို တည်ဆ​ောက်ရမလဲ ဆိုတာကို အကြမ်းအားဖြင့်​​ပြ​ောကြည့်​ပ​ေးပါမယ်။ ကျွန်​တ​ော်လည်း အရမ်း မကျွမ်းကျင်လို့ အမှားပါရင် ပြန်​ပ​ြ​ောပြ​ပ​ေးပါ။
အရင်ဆုံး လက်ရှိရေးနေတဲ့ Solution ထဲကို SQL Server Database Project တစ်ခု ထည့်ပေးရပါတယ်။
အဲ့ထည့်ထားတဲ့ SQL Server Database Project ထဲမှာ Add New Item=> Stored Procedure ထပ် Add လိုက်ပါ
အဲ့ဒီ့ Stored Procedure File ထဲမှာ ခင်ဗျားရေး ချင်တဲ့ Stored Procedure Code တွေရေးလို့ ရပါ ပြီ
ကျွန်တော် ရေးတုန်းက တော့ MSDN က ​လ​ေ့လာပြီး​ရ​ေးတယ် ခင်ဗျား​လ​ေ့လာချင်ရင်
ဒီ လင့် မှာ သွားဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး Project ထဲက နေ Stored Procedure ကို လှမ်း တည်ဆောက်တာ ပြုပြင်တာကို SQL Common Language Runtime သို့မဟုတ် SQL CLR လို့ ခေါ်ပါတယ်။ နောက် ကိုယ်ဟာကို Googling လုပ်လို့ရအောင်ပါ။
You can execute "CREATE STOREDPROCEDURE" script just like normal queries to create new storedprocedure.
Example C# code will be like this
SqlConnection l_Connection = new SqlConnection(GetConnectionString());
SqlCommand l_Command = new SqlCommand();
l_Command.Connection = l_Connection;
l_Command.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
l_Command.CommandText = @"
CREATE PROCEDURE [dbo].[sp_yourProcedureName]
You might want to drop the procedure first if you already created before.
IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects WHERE type = 'P' AND name = 'sp_yourProcedureName')
DROP  Procedure  [dbo].[sp_yourProcedureName]
But dropping and recreating storedprocedure everytime you execute is not recommended as it need to create execution plan again and it may effect the performance of the storedprocedure.